Wararka - Malaysia waxay sameysay 3 kamid ah 4 kamid ah galoofyada caafimaadka ee aduunka. Warshaduhu waxay ku shaqeynayaan awood badhkeed
Malaysia waxay sameysaa 3 ka mid ah 4-tii galoofyada caafimaadka ee adduunka. Warshaduhu waxay ku shaqeynayaan awood badhkeed
Malaysia waxay sameysaa 3 ka mid ah 4 of galoofyada caafimaadka ee adduunka. Warshaduhu waxay ku shaqeynayaan awood badhkeed
Warshadaha gacmo gashi ee Malaysia, oo sameeya inta badan gacmaha muhiimka u ah ilaalinta gacmaha, waxay ku shaqeeyaan qiyaas ahaan kala bar markii ay aad ugu baahan yihiin, sida ay ogaatay Associated Press.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadku waxay gacma gashiga u furaan inay yihiin safka koowaad ee kahortaga qabashada COVID-19 ee bukaanada, waxayna muhiim u yihiin ilaalinta bukaanka sidoo kale. Laakiin sahayda gacmo gashi ee heer-caafimaad ayaa hoos u dhacaya adduunka, xitaa iyadoo bukaanno badan oo qandho, dhidid iyo qufac ay maalin walba isbitaalada yimaadaan.
Maleesiya ilaa hada waa shirkadda ugu weyn ee gunta caafimaadka ee adduunka, iyada oo soo saarta wax ka badan seddex ka mid ah afar galoofyada suuqa. Warshaduhu waxay taariikh ku leeyihiin si xun ula dhaqmida shaqaalaha soogalootiga ah ee ka daalaa caaryahooda cabbirkooda gacanta lagu shubo maadama ay ku daateen caag ama caag dhalaalay, shaqo kulul oo daal badan.
Dawladda Malaysia waxay amartay wershadaha inay joojiyaan waxsoosaarka oo dhan laga bilaabo Maarso 18. Kadibna, mid mid, kuwa sameeya alaabooyinka loo arko inay yihiin kuwo muhiim ah, oo ay ku jiraan galoofisyada caafimaadka, ayaa looga baahday inay raadsadaan ka-reebitaanno dib loo furo, laakiin kaliya kalabar shaqaalahooda si loo yareeyo halista gudbinta fayraska cusub, sida ku xusan warbixinnada warshadaha iyo ilaha gudaha. Dawladdu waxay leedahay shirkadaha waa inay daboolaan baahida gudaha ka hor inta aysan wax dhoofin. Ururka Soo-saareyaasha Gacan-gashiga Rubber-ka Maleesiyaanka ayaa toddobaadkan codsanaya in laga reebo.
"Joojin kasta oo loo maro wax soosaarka iyo qeybaha maamulka ee warshadeena waxay la micno tahay joojinta gebi ahaanba soosaarka gacmo gashiga waana masiibo adduunka," ayuu yiri madaxa ururka Denis Low oo la hadlay warbaahinta Malaysia. Wuxuu sheegay in xubnahoodu ay ka heleen codsiyo malaayiin galoofyo ah oo ka kala yimid ilaa 190 dal.
Soo dejinta Mareykanka ee galoofyada caafimaadka ayaa horeyba 10% uga hooseeyay bishii la soo dhaafay isla muddadan oo kale sanadkii la soo dhaafay, marka loo eego xogta ganacsiga ee ay soo ururiyeen Panjiva iyo ImportGenius. Khubarada ayaa sheegaya in hoos u dhac weyn la filayo toddobaadyada soo socda. Wadamada kale ee gacmo gashi sameeya oo ay ka mid yihiin Thailand, Vietnam, Indonesia, Turkey iyo gaar ahaan Shiinaha ayaa sidoo kale arka in wax soo saarkooda la carqaladeeyay viruska awgiis.
Tabaruceyaasha Keshia Link, bidix, iyo Dan Peterson waxay ka soo dajinayaan sanduuqyada galoofyo gacmeed iyo masaxaadda aalkolada goobta deeq-bixinta ee sahayda caafimaad ee Jaamacadda Washington ee Seattle Maarso 24, 2020. (Elaine Thompson / AP)
Kastamka iyo Ilaalinta Xuduudaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay Talaadadii inay xayirayaan xayiraad laga soo dejiyo mid ka mid ah shirkadaha soo saaraya galoofiska caafimaadka Malaysia, WRP Asia Pacific, halkaas oo shaqaalaha lagu eedeeyay inay ku qasbeen inay bixiyaan khidmadaha qorista ee ugu badan $ 5,000 dalalkooda, oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Nepal.
CBP waxay sheegeen inay amarka Sebtembar sare u qaadeen kadib markii ay ogaadeen in shirkaddu aysan hadda wixii ka dambeeya soo saarin galoofyada caafimaadka iyada oo lagu xirayo xaalad qasab ah.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in dadaalkan uu si guul leh u yareeyay qatarta silsiladda oo muhiim ah waxayna keentay xaalado shaqo oo wanaagsan iyo ganacsi u hoggaansamaya," ayuu yiri Kaaliyaha Sare ee CBP ee Xafiiska Ganacsiga Brenda Smith.
Warshadaha wax soo saarka gacmo gashi ee Koonfur-bari Aasiya ayaa caan ku ah xadgudubyada shaqaalaha, oo ay ku jiraan dalbashada khidmadaha qorista ee u diraya shaqaalaha saboolka ah burburka deynta.
"Inta badan shaqaalaha soo saaraya galoofyada muhiimka u ah cimilada caalamiga ah ee COVID-19 weli waxay ku sugan yihiin halista ugu badan ee qasabka shaqada, badiyaa waxay ku jiraan addoonsiga deynta," ayuu yiri Andy Hall, oo ah khabiir ku takhasusay xuquuqda shaqaalaha muhaajiriinta ah oo diiradda saaraya xaaladaha warshadaha gacmo gashi ee Malaysia iyo Thai laga soo bilaabo 2014.
Sannadkii 2018, shaqaaluhu waxay u sheegeen dhowr hay'adood oo warbaahineed inay ku xanniban yihiin warshado iyo mushahar la'aan aad u badan iyagoo shaqeynaya waqti dheeraad ah. Jawaab ahaan, soo dejiyayaasha, oo ay ku jiraan Adeegga Caafimaadka Qaranka ee Ingiriiska, waxay dalbadeen isbedel, shirkaduhuna waxay ballanqaadeen inay joojinayaan khidmadaha shaqaalaysiinta ayna siin doonaan xaalado shaqo oo wanaagsan.
Tan iyo waagaas, u doodayaasha sida Hall waxay yiraahdaan waxaa jiray horumar, oo ay kujirto cunnooyin dhawaan lasiiyay warshadaha qaar. Laakiin shaqaaluhu wali way dhibtoodaan wakhti dheer, isbedel dhib badan, waxayna helaan mushahar yar si ay ugu sameeyaan gacmo gashi caafimaad oo adduunka ah. Inta badan shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha Malaysia waa soogalooti, ​​waxayna ku nool yihiin hudheelo camiran oo ku yaal warshadaha ay ka shaqeeyaan. Sida qof kasta oo jooga Malaysia, hadda waa loo xiray fayraska awgiis.
"Shaqaalahan, qaar ka mid ah halyeeyada aan la arki karin ee xilligan casriga ah ee la dagaallamaya cudurka faafa ee COVID-19, waxay mudan yihiin in ixtiraam badan loo muujiyo shaqada muhiimka ah ee ay qabtaan," ayuu yiri Hall.
Gacan-gashiyada ayaa ka mid ah noocyo badan oo qalab caafimaad oo hadda ku yar Maraykanka
AP ayaa soo werisay usbuucii la soo dhaafay in soo dejinta alaabooyinka caafimaadka ee muhiimka ah oo ay ku jiraan maaskarada N95 ay si aad ah hoos ugu dhacday toddobaadyadii la soo dhaafay sababo la xiriira xirnaanshaha warshadaha ee Shiinaha, halkaas oo soo saarayaasha looga baahan yahay inay ku iibiyaan dhammaan ama qeyb ka mid ah sahaydooda gudaha halkii ay u dhoofin lahaayeen dalal kale.
Rachel Gumpert, agaasimaha isgaarsiinta iyo adeegyada xubinnimada ee Ururka Kalkaaliyayaasha Caafimaadka ee Oregon ayaa sheegtay in isbitaalada gobolka ay "qarka u saaran yihiin dhibaatada."
"Dhamaan guddiga waxba kuma filna," ayay tiri. Waxay inta badan ka maqan yihiin waji-daboolan oo ku filan hadda, ayay tidhi, laakiin "laba toddobaad gudahood waxaan joogi doonaa meel aad u xun marka la eego gacmo gashi."
Mareykanka gudahiisa, walaacyada ku saabsan yaraanta waxay keeneen xoogaa keyd ah iyo saami. Meelaha qaarna waxay weydiisteen tabarucaad dadweyne.
Jawaab ahaan, FDA waxay kula talineysaa bixiyeyaasha caafimaadka ee keydkooda sii yaraanayo ama horeyba u baxeen: ha badalin galoofyada u dhexeeya bukaanada qaba cudur isku mid ah, ama ha isticmaalin galoofyada fasalka cuntada.
Xitaa iyada oo ay haysato sahay ku filan, hay'addu waxay sheegtay in duruufaha jira awgood: "Kaydinta adeegsiga galoofyada nadiifka ah ee nadiifinta marka loo baahdo nidaamyo looga baahan yahay madhalaysnimo."
Toddobaadkii hore dhakhtar Talyaani ah ayaa dhintay ka dib markii laga helay cudurka cusub ee coronavirus. Mid ka mid ah wareysiyadiisii ​​ugu dambeeyay, wuxuu u sheegay idaacadda wararka ee Euronews inay ahayd inuu daweeyo bukaanleyda gacmo gashi la'aan.
"Way dhamaadeen," ayuu yiri.
Waqtiga boostada: Meey-11-2021